I-AllPlan: I-4 izithembiso ezithembekileyo ezisuka kwi-2017-Geofumadas
Allplan: 4 2017 ezithembisa isiqalo esitsha
NgoDisemba, 2016 Zobunjineli, ezintsha
I-Allplan ibonisa isisombululo se-BIM i-Allplan 2017-1: Ixesha elingakumbi lezinto ezibalulekileyo
- Uphuculo oluninzi lokukhululeka kokulawulwa komsebenzi kunye nohlobo lwe-3D.
- Ukutshintshisiswa kwedatha nge-IFC4.
- Ukhetho olubanzi lweenkqubo ezihlangeneyo
I-Allplan inikezela uphuculo olutsha kunye nenkqubela phambili kwisisombululo sayo se-BIM Allplan 2017 kubakhi bezakhiwo kunye neenjini. Ingcaciso yangoku ithetha ukuba intsebenziswano kuzo zonke iiprojekthi zeprojekthi ye-BIM yinkqubela ephezulu. Ukuphathwa ngokulula kwesibonakaliso sokwenza imodeli yesolidi, iimoko ezikhululekile kunye neenxenye ze-3D zenziwe zagqitywa kwaye uluhlu lwezinkcukacha zezonyuli zeenjini ziye zandiswa. Kubasebenzisi, oku kuboniswa ngokukhanya okukhulu, ukugcina ixesha elide kunye nomgangatho ophezulu kwiprojekthi.
I-Allplan 2017-1 inikeza izixhobo ezinamandla zokwenza intsebenziswano yamanzi phakathi kwabo bonke amaqabane kwiprojekthi ye-BIM. Umzekelo, i-palette entsha ye "Taskbar", ehambelana ngqo nesisombululo esivulekile esisekelwe kwi-bim + cloud, ivumela imisebenzi ukuba ibelwe ngendlela yekhonkrit, ukuba ilawulwe lula kwaye ilandelwe. Kule nguqulo, i-Taskbar ilula ukuyisebenzisa. Iimpazamo ekucwangcweni zingabonwa kwaye zilungiswe kumanyathelo okuqala.
Iinkqubo zokusebenza ngokufanelekileyo zokwenza imodeli kwi-3D
Kwangoku, akukho mida ekumodeni nokuguqulwa kweziqili, iifom zentlawulo kunye nezinto. I-3D solids ingafaniswa ngokuchanekileyo ngaphandle kokusetyenziswa kwe-polygonization ngaphambili. Xa sisebenzisana nezixhobo zefowuni zamahhala ezichazwe ngumsebenzisi, abasebenzisi ngoku banokuguquguquka okungakumbi.
Ukuphuculwa kwe-IFC4 ukuthumela
I-Allplan 2017-1 inceda ukuthunyelwa kwemifanekiso ye-BIM kwifom IFC4 okokuqala. Ukusebenzisana nezinye izisombululo ze-BIM kuye kwaphuculiswa kakhulu, ilahleko zolwazi kunye nokungalungiswanga kuye kwancitshiswa kakhulu. Nge-Allplan 2017-1, ukugqiba iinkcukacha, izixhobo ze-2D kunye neengcamango ngoku ziyakuthunyelwa ngaphandle kwe-IFC4 isikhombisi-esinceda ukuphucula umgangatho wokucwangcisa.
Iikhathalogu ezintsha zeelungu ezifakiwe
Amalungu adibeneyo ayimfuneko ekumiselweni kwemigoqo yokuqinisa kwiindawo ezincinci. Ukuba ayigcinwanga kwinkqubo, kufuneka iqhutywe ngesandla. Allplan 2017-1, zinxulunyaniswe iikhathalogu ANCOTECH Baron-C no sah SAS 670 / 800 unxibelelwano kwinkqubo ekhoyo. Ngokukhethwa kwamanje kunye nokuhlaziywa kwezihlanganisi ezifakiwe, abasebenzisi baya kulondoloza ixesha kunye nokuphucula umgangatho wemidwebo yabo.
U-Allplan wanikezela i-Digital Transition in Construction ngombono kwi-platform yayo ye-bim + eFransi
U-Allplan uphumelele ibhaso kwi-Digital Transition ekwakhiweni, kwinqanaba elithi "amathuluzi okubambisana kunye nokuchitshulwa kolwazi" ngokubonga kwi-BIM bim + platform. Le mbasa yanikezelwa neengcali kunye nababoneleli isisombululo-software nabayili bezakhiwo, iinjineli kunye nabaphathi beziko kwi mabhaso zonyaka Digital Transition ekwakheni, esenzeka ngoNovemba 29 eParis, eFransi.
Indlela OpenBIM de Allplan Yiloo nto eyayiqinisekisa i-jury, eqinisekisa ukusebenzisana phakathi kwabo bonke abathathi-nxaxheba beprojekthi ye-BIM ngexesha langempela. Indlela ye-OpenBIM ye-Allplan ivumela bonke abantu abachaphazelekayo ukuba babelane ngamaxwebhu, iithemplates kunye neempawu kwiindawo ezikhuselekileyo, ngokutsho kweengcali. Phakathi kwabakhethiweyo kulolu hlobo "amathuluzi okubambisana ngokuchishana ngolwazi" beyi-A360 esuka kwi-Autodesk, BIMPRO esuka eGestpro nase-Edifycad.
I-Allplan i-Architects 'iDarling 2016
- Abakhi be-1.600 bavota ukukhetha umenzi wabo
- I-Allplan iwina ibhaso lesithathu
- Iimbasa zebhaso ziya kwenzeka eCelle, Lower Saxony kunye neendwendwe ze-350
I-Allplan ibizwe ngokuba ngu-Architects 'iDarling® okwesithathu, ekunikezelwa kwi2012 kunye ne2014. Le statuette lokufuna Golden Phoenix yanikezelwa neengcali kunye nababoneleli izisombululo software nabayili bezakhiwo, iinjineli kunye nabaphathi beziko, ngokusekelwe eMunich, kwi gala ngomhla 10 Novemba 2016, apho Allplan igama njengoko umenzi okhethiweyo kwi-"I-Software Architecture". Eli bhaso lisiphumo sophando olubanzi olwenziwa ngu-Heize, inkampani yokuphangela imarike.
"Kuyinto enelisayo ukubizwa ngokuba ngu-Architect 'Darling okwesithathu," kusho uMichael Koid, CEO we-Allplan GmbH. "Abakhethi bevoti bayayisekela injongo yethu yokunikela isisombululo esihle kunazo zonke kubaxhasi bethu ukuba benze lula umsebenzi wabo kwiiprojekthi ezakhayo zokuzakhela, zibeka inzuzo yokukhuphisana. Ngale ndlela, sinegalelo ekudalweni kwezakhiwo ezingcono. "
Kanye ngonyaka, abaqulunqi kunye nabaqulunqi bafumana ithuba lokuvota ukuvavanya abenzi babo abakhethiweyo. U-Heinze GmbH wanikezela ngee-Arlington 'Award's Awards kwixesha lesithandathu kwiCelle, Lower Saxony. 1.600 malunga bezakhiwo kunye nabayili wakhetha abaphumeleleyo kwiindawo ezahlukeneyo imveliso veinticuatro24 iinkalo ezisixhenxe lorhwebo Darling® cruzado.Allplan Architects 'iye-yabe iselithiywe okwesihlandlo sesithathu, alandelayo uwina 2012 kunye 2014. The golden oqingqiweyo phoenix wanqwenela iye yanikezelwa iingcali BIM eMunich-based kunye nababoneleli izisombululo software nabayili bezakhiwo, iinjineli kunye nolawulo ifasilithi isiganeko somsitho ngoNovemba 10 2016, ogama Apho oyithandayo Allplan umenzi kwi "Software lomhleli" didi. Ibhaso yiphumo lophando oluninzi oluqhutywa yinkampani yocwaningo lweemarike uHeinze.
Izinto ze-BIM sele zifumaneka kwifayile yefayile ye-Allplan.
I-Allplan kunye ne-BIMobject bahlangene ngokubambisana ngokuthe ngqo; ziye zazisa ukuba kwixesha elizayo, abakhi bezobunjineli kunye neenjineli ezisebenza kunye neAllplan baya kuba nako ukuxhaphaza ngendlela engcono ngayo inzuzo ye-BIM (Ukwakha i-Information Information Modeling).
Kwimvumelwano yentsebenziswano, zombini iinkampani zivumile ukuba i-BIMobject iya kunika izinto ze-BIM kwifom ye-Allplan kwi-platform yayo ye-BIMobject.com yamafu kwixesha elizayo. Idatha enikezelwe ngqo ngumthengisi iqulethe iinkcukacha ezicacileyo nemveliso. Abasebenzisi lula Allplan BIM izinto zibe nezicwangciso zabo, nto leyo kakhulu lula kwaye nabo umsebenzi wabo wemihla ngemihla kunye iqonga ilifu BIM intsebenziswano, bim +, amathuba kwentsebenziswano web-based iza kwandiswa. Kwiprojekthi yokuqala yentsebenziswano, i-BIMobject iya kushicilela izinto ze-BIM ezithile kwifomathi yase-Allplan, kunye nezinto eziqhelekileyo.
Más información: https://www.allplan.com/es.html
Post edlulileyo«Edlulileyo Yaphula password VBA Microstation Macro
Post Next I-National System of Property Management SINAPOkulandelayo "